प्याजको प्रतिबन्ध खोल्न भारतसँग पहल
जनता भ्वाइस calendar_today २० असोज २०७७, 7:27 am
२० असोज, काठमाडौं ।
नेपालका लागि चाडपर्वको मुखमा प्याजको सहजीकरण गरिदिन छलफल भई रहेको वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले बताए ।
‘हामी अनौपचारिक छलफलमा छौँ, यही चरणमा केही सहमति बने औपचारिक प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ वाणिज्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले भने । प्याजको आयात खुलाउन वाणिज्य मन्त्री र सरकारका अन्य निकायबाट पनि अनौपचारिक सम्बाद जारी रहेको सचिव अर्यालले बताए ।
अनौपचारिक सम्बादमा भारतीय अधिकारीहरुले आफ्नै समस्याहरु बताउने गरेको उनले सुनाए । प्याज सहज हुनुपर्छ भनेर मन्त्रालय गम्भीर ढंगले अगाडि बढेपनि सहमतिको निश्चित आकार भने बनिनसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आफ्नो मुलुकमा अभाव भएको भन्दै भारतले गत भदौ २९ गतेदेखि प्याजको निर्यातमा रोक लगाएको छ । सुकेको प्याजका लागि भारतमा निर्भर नेपाली बजारमा अहिले प्याजको हाहाकार छ ।
भारतीय प्रतिबन्ध अघि बजारमा प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँमा किनबेच हुने प्याजको भाउ अहिले एक सय ५० रुपैयाँ भन्दा माथि पुगेको छ । मुख्य चाडपर्वमा प्याजको माग अत्याधिक भएपनि बजारमा प्याज भने पाउनै छोडेको उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन् । अनलाईन खबरले लेखेको छ ।